IMDB: 5.7/10 157 votes
Girl’s Blood 2014 18+ (Adult Movie)
San Andreas (2015) San Andreas (2015)__________IMDb - 6.0/10 Channel Myanmar က ပရိတျသတျတှအေတှကျ The Rock မငျးသားကွီးပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ စိတျလှုပျရှားဖှယျ စှနျ့စားခနျးတှနေဲ့ ရုပျရှငျကား တဈကားကို တငျပေးလိုကျပါပွီ။ ဒီဇာတျကားဟာ IMDb Rating 6.0 ရရှိထားပွီး ကွညျ့ရှုဖို့လကျမလှတျသငျ့တဲ့ ရုပျရှငျကားကောငျးဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ အဖွဈအပကျြက ဒီဇာတျကားမှာ The Rock လို့လူသိမြားတဲ့မငျးသားကွီးဟာ ကယျလီဖိုးနီးယား မှာဖွဈပကျြသှားတဲ့ ပွငျးထနျတဲ့ ငလငျြကွီးကွားက အသကျရှငျကနျြတဲ့သူတှကေို ရှာဖှကေယျဆယျမဲ့ ရဟတျယာဉျပိုငျးလော့ တဈယောကျပါ။ ငလငျြဒဏျမှာ အသကျရှငျကနျြခဲ့တဲ့ သူ့သမီးကို သူနဲ့ Ex-wife ဖွဈလုဆဲဆဲ ဇနီးနဲ့အတူ မဖွဈနိုငျတဲ့ စှနျ့စားခနျးတှဖှေငျ့ပွီး သှားရောကျကယျဆယျကွမှာပါ။ ဒီဇာတျကားမှာ မငျးသားကွီးရဲ့ ပွညျ့စုံတဲ့ လှုပျရှားမှုတှေ အပွငျ ကွညျ့ဖူးသမြှထဲမှာ အကောငျးဆုံး လို့ ပွောလို့ရတဲ့ CGI effect တှကွေောငျ့ ပါးစပျအဟောငျးသားနဲ့ကွညျ့ရှုကွရမှာပါ။ ဒါ့အပွငျ ...
IMDB: 6.0/10 205,222 votes
Scooby-Doo! And WWE: Curse of the Speed Demon (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး စကူဘီ ဒူး ချစ်သူများအတွက် ၂၀၁၆ ထွက် အသစ်ကို တင်ပေးထားပါတယ်။ IMDb 5.8 နဲ့ပါ။ စကူဘီ ဒူး အဖွဲကို WWE ကာရိုက်တာ Undertaker, Triple H တို့ နဲ့ တွဲဖက်ပေးထားပြီး လျို့ဝှက်ဆန်းကြယ် အမှုတစ်ခုကို ဖြေရှင်းကြတဲ့ အကြောင်းပါ။ အားပေးကြပါဦး။File size…(750MB) Quality…BR-Rip 720p Format…mp4 Duration….01:20:56 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Thanhtike Zaw Download Here (750MB) Download Small File Size (340 MB)
Scooby-Doo! And WWE: Curse of the Speed Demon (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Sultan (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး ( Blu-ray Update) နပန်းဆိုတာ အားကစားမဟုတ်ပါဘူး ရဲရင့်တဲ့ လူ၂ယောက်ကြားက တိုက်ပွဲ အဲ့တာ ကျွန်တော်ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနေ်ာ စူလ်တန်က ပြောခဲ့တာ ကဲဗျာ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ၂၀၁၆ ထွက် မင်းသားကြီး ဆလမန်ခန်းရဲ့ ကားသစ်တကားကို ထပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် အလယ်အလတ်ပိုင်းအရွယ်ရှိတဲ့ နပန်းချန်ပီယံတစ်ယောက် Olympic မှာ India ကိုယ်စားပြုဝင်ပြိုင်ပြီး လက်ဝှေ့လောကကို ပြန်လာဖို့ ကြိုးပမ်းတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်က ပြိုင်စံရှား အောင်မြင်ကျော်ကြားလှတဲ့ နပန်းသမားကြီး Sultan ခုတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အရှုံးသမားဖြစ်နေရာက ဆုံးရှုံးသွားသမျှကို ပြန်ယူဖို့အတွက် ကြိုးဝိုင်းအတွင်းကို ပြန်ဝင်ဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဒီကားကို စသိမိတာကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ရုပ်ရှင်ရုံမှာပြတဲ့ trailer ကြောင့်ပေါ့။ ပုံစံကမဆိုးဘူး၊ ရိုက်ချက်လေးတွေ မိုက်တယ်၊ တအားကြီးမကောင်းတောင် ထူးထူးခြားခြားနဲ့ အပန်းပြေနိုင်တယ် ကြည့်ဦးမှဆိုပြီးတော့ ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျ။ ဘယ်လိုကောင်းမယ် ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မျိုး မှန်းထားတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူး။ ဇာတ်လမ်းပိုင်းမှာ Sultan ဟာ Southpaw နဲ့ နည်းနည်းလေးသွားဆင်တယ်။ ဇာတ်ဝင်ခန်းတချို့ ပြောသွားတဲ့ ပေးသွားတဲ့ message တချို့အရ နောက်လာမဲ့ Amir Khan ရဲ့ ...
Sultan (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး ( Blu-ray Update)
Jason Bourne (2016) Jason Bourne (2016)_______IMDb - 6.6/10Jason Bourne2002 လောကျကဖွဈမယျထငျတယျ။ James Bond နဲ့ဆနျ့ကငျြဘကျ ဇာတျကောငျတဈယောကျ ရုပျရှငျလောကမှာ ပေါလာတယျ။ နာမညျကတော့ Jason Bourne တဲ့။ သူ့ကိုကြှနျတျောတို့စတှတေ့ော့ Mediterranean ပငျလယျထဲမှာ မြောနတေဲ့သူတဈယောကျအဖွဈ။ ကြောမှာလညျး သနေတျကညျြပေါကျရာ နှဈခုနဲ့။ ပွဿနာက သူဟာ ဘယျကလာပွီး ဘာဖွဈခဲ့လဲဆိုတာ သူကိုယျတိုငျမသိတာပဲ။ ဒီလိုနဲ့သူတဈဖွညျးဖွညျးသိလာတာကတော့ သူဟာ CIA Operation တဈခုဖွဈတဲ့ Treadstone လကျအောကျမှာ အလုပျ လုပျခဲ့တဲ့ CIA အဖှဲ့ဝငျတဈယောကျဖွဈတယျဆိုတာပဲ။ ဒါပမေဲ့ တဈဖှဲ့လုံးနဲ့တဈယောကျခှဲထှကျသှားတဲ့ Jason Bourne တဈယောကျဟာ CIA ရဲ့အရှုပျအရှငျးတှမှော ပါဝငျပတျသကျလာခဲ့တာ Bourne Identity (2002), Bourne Supermacy (2004), Bourne Ultimatum (2007) နဲ့ယခုဆိုရငျ Jason Bourne ...
IMDB: 6.6/10 201,655 votes
The Bourne Ultimatum (2007) The Bourne Ultimatum (2007) IMDb - 8.0/10______Rotten - 92%File size…(1 GB) Quality…DVD-Rip Format…mp4 Duration….01:56:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Than HtikeThe Bourne ဇာတျကားမြားကို (The Bourne – Collection ) တှငျကွညျ့ရှုပါ။
IMDB: 8.0/10 594,130 votes
The Bourne Supremacy (2004) The Bourne Supremacy (2004) IMDb - 7.7/10______Rotten - 82% Matt Damon ရဲ့ နာမညျကွီး The Bourne ဇာတျကားတှရေဲ့ ဒုတိယဇာတျကားပါ။CIA အကျရှငျဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈပါတယျ။Rating တှကေတော့ IMDb (7.7/10) Rotten Tomatoes (82%) ထိရရှိထားတာဖွဈတဲ့အတှကျဘယျလောကျထိကောငျးမယျဆိုတာတော့ ကိုယျတိုငျပဲဆုံးဖွတျလိုကျကွပါ။ (မွနျမာစာတနျးထိုးကိုတော့ AP Newschool မှကိုယျတိုငျဘာသာပွနျတငျဆကျလိုကျခွငျးဖွဈပါတယျ။) The Bourne ဇာတျကားမြားကို (The Bourne – Collection) တှငျကွညျ့ရှုပါ။Matt Damon ရဲ့ နာမည်ကြီး The Bourne ဇာတ်ကားတွေရဲ့ ဒုတိယဇာတ်ကားပါ။CIA အက်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။Rating တွေကတော့ IMDb (7.7/10) Rotten Tomatoes (82%) ထိရရှိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လောက်ထိကောင်းမယ်ဆိုတာတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါ။ (မြန်မာစာတန်းထိုးကိုတော့ AP Newschool မှကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်တင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။) The Bourne ဇာတ်ကားများကို (The Bourne – ...
IMDB: 7.7/10 423,474 votes